BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Kenya: Ka bixiddeenu waqti ma lahan
Kenya: Ka bixiddeenu waqti ma lahan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Novermber, 2012, 16:39 GMT 19:39 SGA
Wasiirka Dalxiiska Kenya, Danson Mwazo ayaa sheegay in joogitaankooda Soomaaliya yahay mid aan cayinneyn oo aan waqti lahayn. Waxa uu sabab uga dhigay inay la dagaallamayaan argagixiso.
Wasiirka dalxiiska Kenya, Danson Mwazo waxa uu u warramay Farxaan Maxamed Jimcaale
Wasiirka Dalxiiska Kenya, Danson Mwazo ayaa sheegay in joogitaankooda Soomaaliya yahay mid aan cayineyn oo aan waqti lahayn.
Wasiirku, waxa uu sheegay in aan waqti loo qaban karin ka bixitaanka ciidankooda ee Soomaaliya, waxaana uu sabab uga dhigay inay dagaal kula jiraan argagixiso.
Waxa uu sheegay in al-Shabaab ay qoratay dhallinyaro Kenyan ah, oo fursad shaqo la'aan awgeed ay ugu biireen.
Danson, ayaa waxa kale oo uu ka hadlay wafdi Madaxweynaha Soomaaliya u diray Kismaayo oo laga celiyay inay galaan magaalada Kismaayo, oo uu sheegay inay ahayd in qabanqaabo la sii sameeyo.
Waxa uu beeniyay eedeymaha ku saabsan in maliishiyo beeleed ay gacan siinayaan.
Wasiirka, Danson Mwazo, waxa uu ka hadlay dhibaatada ka soo gaartay daxiiska Kenya dagaalka al-Shabaab ay kula jiraan, oo uu sheegay in boqolkiiba laba hoos u dhac ku yimid dalxiiska dalka Kenya ammaan darida iyo weerarada ka dhaca Kenya darteed.
Wasiirka, ayaa waxa uu sheegay in weerarrada al-Shabaab ay saameyn ku yeesheen dalxiiska guud ee dalka, laakiin waxa uu sheegay in meelaha qaar ay daran yihiin saameynta ay ku yeesheen, sida Mombasa oo kale.